साह परिवारको कहालीलाग्दो पीडा, ‘मम्मी उजरा सारी अहाँके नई निक लागैय’ - News Today
राजविराज, १३ मसिर । ‘मम्मी उजरा सारी अहाँके नई निक लागैय’ (आमा सेतो सारी तपाईलाई सुहाउँदैन) ७ वर्षिय छोरा आदर्शको कुरा र दुबै हातमा गोली लागेकी ११ वर्षिया छोरी मुस्कानले ‘मम्मी, पापा आब कहियो नई एतै’( आमा, बुवा अब कहिले पनि आउनु हुन्न ?’ अर्की ७ वर्षिया कान्छी छोरी दीपालीले आमा पूनम कुमारी साहको आँखाको आँसु पुछ्दै ‘मम्मी अहाँ नई कानु’ । यस्तै जेठी छोरी नेहा एक्लैमा भक्कानिएर रुने गर्छिन् ।
यस्ता दर्दनाक दृष्य र सम्वादले जो कोहीको मन पग्लिनु स्वाभाविकै हो । यस्तै बज्रपात आईपरेको राजविराज नगरपालिका वडा नम्वर–१ का साह परिवारमा । मंसिर ६ गते बेलुकीको ४.३० बजेको समयमा राजविराजको मेनरोडमा प्रहरी र आन्दोलनकारीहरु बीच झडप भइरहेको थियो । बिहानैदेखि आन्दोलनकारीहरुले यताबाट ढुङ्गामुढा गरिरहेका थिए भने प्रहरीले सयौं राउण्ड अश्रँृ ग्यास फायर गरिरहेका थिए । बाहीर दिनभरी गोलीका आवाज आइरहेको थियो ।
कहाँ के कसो भएको हो ? भनी बुझ्न दिलिप कुमार साह टेलिभिजन हेरिरहेका थिए । उनले आफ्नी सङ्गीनी पूनमलाई चिया बनाउन भने । पत्नी बनाएको चिया खाइसकेपछि आफ्नै घरमा चाँर–पाँच पटक केही ठोक्किएको आवाज आयो । बुवासँगै रहेकी छोरी मुस्कान कौसीबाटै चियाउन जाँदा बुवा दिलिपले बाहिरतिर नहेर पटाखाको आवाज होला भन्दै कोठाभित्र आउ भन्दै गर्दा प्रहरीले निशाना बनाएर ताकेको गोली उनको निधारमा लाग्न पुग्यो । दिलिप तत्कालै भुइँमा ढले । छोरी मुस्कानलाई पनि दुवै हातमा गोली लागेको थियो । दुवै हातबाट रगत बगिरहेको थियो । उनी चिच्याउँदै ‘मम्मी…..बुवाको टाउँकोबाट रगत बगिरहेको छ’ आमालाई गुहारिन् । त्यतिबेला दिलिप भुइँमा ढलेका थिए भने रगत निधारबाट रगत बगिरहेको थियो । पूनम यस्तो दृष्य देखेपछि आतिइन् । दुबै हातबाट रगत बगिरहेको अवस्थामा पनि मुस्कान कपडा खोजेर रगत पुछ्न थालिन् । बुवालाई केही नहोस् भन्ने चिन्ताले आफ्नो पीडा बिर्सेर बुवालाई हस्पिटल लग्न सुझाइन् ।
पूनमले आफ्ना पतिको यस्तो हालत देखेर छर–छिमेकलाई गुहारे । कुनै साधन नपाएपछि बेहोस अवस्थामा रहेका दिलिपलाई दुई तीन जनाले टाँगेरै डा. अशोकानन्द मिश्रको क्लिन लगे । अवस्था गम्भीर भएपछि वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान लगिने क्रममा दिलिप सदाका लागि विदा भए । उनी न त आन्दोलनकारी थिए नत उनी कुनै पार्टीको कुनै जिम्मेवार तहमा थिए । उनी थिए त केवल सुच्चा व्यवसायी । जो आफ्नै घरको ग्राउण्ड फ्लोरमा ईलेक्ट्रोनिक्स पसल चलाउँदैआएका थिए ।
अति मिलनसार दिलिपको प्रहरीले चलाएको गोलीबाट मृत्यू भएपछि साह परिवारमा यतिबेला रुवावासी नै चलेको छ । उनी विदा भएको आठौं दिन बितिसकेको छ । उनको पोष्टमार्टम पश्चात शनिवार राती नै अन्तिम संस्कार गरिएको छ । यद्यपी साहको परिवारमा जतिबेला पनि रुवावासी चल्न थाल्छन् । उक्त घटनाको विषयमा जानकारी लिन साहका परिवारजनसँग दैनिकजसो १०–२० जना आउने गर्छन् । घटनाको विषयमा जानकारी दिने क्रममा भक्कानो छाडेर लालाबालासहित रुन थाल्छिन् धर्मपत्नी पूनम । आफ्ना पतिलाई प्रहरीले ताकेरै गोली हानेको बताउँदै उनी भन्छिन् ‘मेरा पतिलाई राजनीतिसँग कुनै मतलब थिएन, आन्दोलनमा पनि जानु भएको थिएन, आखिर किन मेरा पतिलाई गोली हानेर मारियो ? उनले कसरी लालाबालाको पालन पोषण गर्ने तथा पढाउने ? चिन्ताले सताउने गरेको बताउँदै पूनमले भनिन् ‘मेरो राजालाई गोली हान्नेलाई पनि पनि आँखा अगाडि नै कडा कार्वाही भएको हेर्न चाहन्छु । आफ्नै घरमा पनि बस्दा पनि डर लाग्ने गरेको बताउँदै आफ्ना पतिको घटनाको विषयमा न्यायिक छानबिन गर्न समेत उनले पत्रकाहरुहरुमार्फत माग गरेका छन् ।
Previous : आ–आफ्नो चश्मा फराकिलो बनाउः शिक्षक महासंघ
Next : पाँचवटा जिल्लाको विवाद मिल्यो भने आन्दोलन रोकिन्छःमृगेन्द्रसिंह यादव